लुट धन्दामा विकसित नीजि विद्यालयः मेरो ८ बर्षको अनुभव - TV Annapurna
लुट धन्दामा विकसित नीजि विद्यालयः मेरो ८ बर्षको अनुभव
July 30, 2017 Annapurna TV
लुट पधेरे साइलो लुट
अभिभावक सोझा छन
पचोस् या नपचोस् चिन्ता नगर
छेर्ने गरेर नै लुट !
यो कविताबाट नै मेरो लेख सुरु गर्दैछु । मैले ८ बर्ष काठमाडौंका नीजि विद्यालयमा पढाए । रहरले पढाएको चाहि होइन मेरा पनि बाध्यताहरु थिए । यो देशमा झाङ्गिएको बेरोजगारीको सिकार म पनि भए । कहाँ जाउ, के गरौ ? मसँग बलिया सर्टिफिकेटका पानाहरु थिए जसका कारण, यी महंगा ठग धन्दामा मेरो इन्ट्री भो । एउटा शिक्षकको हिसाबमा । नीजि विद्यालयका यी लुटेराहरुसँग मेरो सुरुमा नै द्वन्द्व सुरु हुन्थ्यो, ‘जागिर खान गएको छ, तपाईं सर्टिफिकेट धरौटी राख्नुस् रे ?’
म ऋण लिन गएको त होइन्, बौद्धिक कामका लागि गएको हो । मैले मेरा सर्टिफिकेट धरौटी राख्दिन भनेर धेरै चोटी यी लुटेराका कार्यालयबाट फर्केको छु । दुःख त त्यती बेला लाग्दो रहेछ जतिबेला ति अन्डर एस.एल.सीहरुले हाम्रो सर्टिफिकेट हेरेर, मुख फाल्दै केटिले गरिखान्छे रे ? सोझा अभिभाबक र विद्यार्थीलाई मेरो आफ्नै आँखा अगाडी लुटेको देख्दा नीजि बिद्यालयबाट सदाका लागि बिदा लिए ।
महिना भरी दुःखको पैसाले गरीब बालबालिका प्रति आफुले सकेको सहयोग गरेको छु । गरिबले पनि गुणस्तरिय शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जो सँग पैसा छ त्यसले मात्रा इन्ट्री पाउने ति महंगा स्कुलको गुणस्तरको हात मैले मजाले छामेको छु । यतिसम्म लुटिन्छ कि मलाई अब लेख्नै पर्ने बनायो । लुटविरुद्ध लेख्यो भनेर माफियाको निद पनि हराम हुनेछ तर म कुनै एउटा विरुद्ध लड्दै छैन्, म यहाँको विधि र प्रकृया माथि बोल्ने छु ।
काठमाडौंका नीजि बिद्यालयको अनुगमन गर्ने हो भने ४५ प्रतिशत नीजि बिद्यालयका संचालकको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नक्कली छन्, अनी यिनैले हामीलाई गुणस्तरको व्याख्या गर्छन ।
कसरी ठगिन्छन्, अभिभाबक ? मेरो भोगाइ ।
विद्यार्थीले प्रथम त्रैमाशिक परीक्षा दिईसकेपछि रिजल्ट घोषणा गर्ने दिन भन्दा १ हप्ता अगाडि प्रिन्सिपलले शिक्षकको बैठकमा यो पहिलो परीक्षा हो अहिले ७५ प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउनुस् भन्ने आदेश दिन्छन । अहिले अभिभाबकलाई खुशी बनाउनु छ ठ्याक्कै यसै भन्छन । मैले सोचे त्यति बेला लुट्न पनि दिमाग चहिदो रहेछ ।
दोश्रो त्रैमाशिक परीक्षा हुनु भन्दा अगाडिको मिटिङमा प्रिन्सिपल भन्छन्, ‘अहिले ६० प्रतिशत बिध्यार्थी फेल गराउनुस्, ट्युसन कोचिङ चलाऊनु परेन ।’ हामी त कामदार जसो भन्छन प्रिन्सिपल त्यस्तै गर्नै पर्यो । मैले यी दलालहरुकोमा बाध्यता पूर्ण ढंगबाट जागिर खाएको हुँदा धेरै चोटि मन अमिलो भएको छ ।
मलाई एक दिन धेरै लाज लाग्यो र रिस पनि उठ्यो । प्रिन्सिपलले गृहकार्य धेरै दिनुस्, हाम्रो कापी धेरै विकेन भनेर हप्कायो । हुन त लुटधन्दा नै हो, मैले केही भनिन ।विद्यार्थीलाई शैक्षिक भ्रमणको कुरा गर्नुस्, प्रत्येकलाई १० हजार ल्याउन भन्नु भन्यो, म कामदार भएको हुँदा मान्नै पर्यो । दुई हजारमा त्यो भ्रमण पुरा हुन्थ्यो । ८ हजार त त्यही कमिशन । बिचरा अभिभावक लुटिदा पनि हेर्ने भन्दा अर्को कारबाही गर्न सकिएन् ।
–विद्यार्थीलाई फुटसल लानु पर्यो १ हजारको दरले उठाउनुस्,
–विद्यार्थीलाई पौडी खेल्न लाने हो, ५०० को दरले उठाउनु होस्,
मलाई पढाउन गएको भन्दा नीजि गाडीमा कन्डक्टर भएको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो । पैसा उठाउने भन्दा अर्को काम नै कम हुने । एक दिन मिटिङमा प्रिन्सिपलले ‘हामी रचनात्मक छौ’ भने । मलाई भित्र मन देखी नै जवाफ फर्काउन मन थियो तर मन मनै सोचे शैक्षिक माफिया लुट्न त एकदम रचनात्मक नै छन् । लुट्ने कला सिक्नु पर्यो भने एक बर्ष निजी बिद्यालयको जागिर गर्नुस् । व्यापारको कला अन्त होइन त्यहा सिकिन्छ ।
‘माखाको बोशो’ निकालेर धार्ने पुराउने कला चाँही नीजि बिद्यालयका संचालकसँग छ । सचेत अभिभाबकलाई एउटा अनुरोध गर्छु, परीक्षा अगावै त्यही प्रश्न पत्रमा तपाईंका छोरा छोरीले कोशिस गरेका हुन्छन । हामी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत त्यही प्रश्न कोचिङमा घोटाउनु है भन्छन । छोरोले डिस्टिन्सन ल्याउछ अनी अभिभाबक नि खुस अनी सन्चालक पनि तर रहस्य त फरक छ । मैले ८ बर्ष यो निजी बिद्यालयको क्षेत्रमा नै बिताए, यी पधेरे शाइलाहरु लुटले आजित बनेर अन्तत शिक्षण पेसाबाट अलग भए । अभिभाबकलाई सचेत गराउन आज यो लेख्नै पर्ने अवस्थामा पुगे ।
लेखकः सावित्री सुवेदी (सगरमाथाकी छोरी)
कपिलवस्तुमा सडकको दुर्दशाः कच्चीमा हिलो, पक्कीमा खाडल
रियल मड्रिडको लगातार हार, नेइमारले बार्सिलोना छाडे रियललाई फाइदा पुग्ने रामोसको दाबी
काठमाडौँ । राति सुतेको बेला छेउमै घुर्ने मान्छे हुँदा कति हैरान हुन्छ भन्ने कुरा सायद सबैले...
तारामण्डलमा एलियन (मानवजस्तै अन्य ग्रहको प्राणी) को जीवन रहेको आशंका गरिँदै आए पनि यसबारे थप रोचक...
बलिउड स्टार भन्दा कम छैनन राजेश हमाल, भारतमा हमाललाई हेर्नेको यत्रो भिड
नेपाली सिनेमा नगरीमा झण्डै दुई दशक एकलौटी राज गर्न सफल महानायक राजेश हमाल पछिल्लो केही समय...
काठमाडौं | जेननेक्स्टले आइफोन ८ तथा आइफोन ८ प्लस भोलि मंसिर १ गते नेपालमा सार्वजनिक गर्ने...
ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदार ‘मुलुक बनाउने’ नारा लिएर चुनावी मैदानमा, के हुने फैसला ?
निर्माण व्यवसायीहरू पनि दलहरूको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक टिकटमा चुनावी मैदानमा छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका एक...
यी हुन कुखुरालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका १४ वर्षीय किशोर
पाकस्तिानमा कुखुरालाई यौनहिंसा गरेको आरोपमा एक किशोर पक्राउ परेका छन् । पाकिस्तानको पञ्जाबस्थित हफिजावादको प्रहरी चौकीले...
हालै गरिएको एउटा अध्ययनका अनुसार यौन सम्पर्कका क्रममा सडन कार्डिएक अरेस्ट आउने घटना महिलाहरुको तुलनामा पुरुषमा...
पंकज धामी, काठमाडौँ । २००३ सालबाट दुबईको अविर जेलमा जेल जिवन विताईरहेका दार्चुलाको साविकको धारी गाविस...
चौथौ त्रैमासिक अवधिमा सामसुङ ईलेक्ट्रोनिक्सलाई अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले उछिन्न सक्ने हालै सार्वजनिक औद्योगिक तथ्यांकले देखाएको...
अमेरिकाको वालमार्टमा तरबुजा लिइरहेको समयमा घाइते भएका एक व्यक्तिलाई न्यायालयले ८० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला...
November 11, 2017 Annapurna TV 3
सामान्यतय यौनसम्र्पकका कारण मानिसको मानसिक तनाव केहीहदसम्म कम हुने कुरा नेपाली समाजमा पनि प्रचलित छ ।...
November 11, 2017 Annapurna TV 1
लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर सवारी साधनको खरिद गर्ने उपभोक्ताले सवारी साधनको सुरक्षामा ध्यान नदिए चाँडै बिग्रिएर...
न्‍यायाधीशको अदालतभित्रै अनौठो चर्तिकला: सन २००६ मा ओक्लोहामा सहरको अदालतमा न्‍यायाधीश डोनाल्ड थम्पसन एउटा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका...
हाम्रो उमेर तौल र उचाई अनुसार मोटाई हुनु आवश्यक छ । सबैको चिन्ता मोटोपन घटाउने मात्र...
एप स्टोरमा आतंक मच्चायो नक्कली ह्वाट्सएपले
लोकप्रिय मेसेजिङ एप ह्वाट्सएपको नक्कली भर्सन १० लाख भन्दा धेरैले डाउनलोड गरेका छन। गुगल प्ले स्टोरमा...